Adikao haingana sy tahirizo ny sary sy ny soratra amin'ny iOS 15 Drag & Drop | Vaovao IPhone
Adikao haingana sy tahirizo ny sary sy ny lahatsoratra amin'ny iOS 15 Drag & Drop
Miguel Hernandez | 15/10/2021 15:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Fampianarana sy torolàlana
iOS 15 Ny rafitra fiasan'ny orinasa Cupertino no nahazo tsikera betsaka tato anatin'ny taona vitsivitsy, tsy vitsy ny mpampiasa niampita ity fanavaozana ity ho "fanavaozana kely", raha ny marina, ny tahan'ny fampidinana ny iOS 15 no tena kely indrindra amin'ny fahatsiarovana. Na izany aza, ny zava-misy dia ny iOS 15 dia ahitana fiasa vaovao marobe izay manamora ny fiainantsika.
Atorinay anao ny fomba fampiasana Drag & Drop ao amin'ny iOS 15, fiasa iray ahafahanao mandika sy mametaka lahatsoratra eo anelanelan'ny rindranasa, ary koa mampidina sary marobe avy amin'ny Safari. Miaraka amin'ireto fika tsotra ireto dia afaka mampiasa ny iPhone na iPad ianao toy ny tena matihanina.
1 Adikao ary apetaho amin'ny Drag & Drop ny lahatsoratra
2 Adikao ary apetaho amin'ny Drag & Drop ny sary
3 Sintomy ny sary marobe avy amin'ny Safari
Adikao ary apetaho amin'ny Drag & Drop ny lahatsoratra
Ny iray amin'ireo fampandehanana Drag & Drop tsy dia be fanamarihana dia ny an'ny mandika ary apetaho ny lahatsoratra, ary amiko dia toa ny mahasoa indrindra indrindra. Mora tokoa ny maka tahaka sy mametaka lahatsoratra amin'ny fampiasana Drag & Drop, asehonay anao:
Safidio ny lahatsoratra tianao halika, na ny lahatsoratra feno na ny fehezanteny. Mba hanaovana izany, kitiho indroa ny lahatsoratra ary afindra ilay mpifantina.
Tsindrio mafy / lava izao amin'ny lahatsoratra (3D Touch na Haptic Touch).
Rehefa nifidy azy ianao, tsy namoaka azy, solafaka izy (swype up).
Ankehitriny amin'ny lafiny iray hafa dia afaka mivezivezy amin'ny iOS ianao, sady mampiasa ny bara ambany no mankany amin'ny fampiharana tianao, nefa tsy mamoaka ny lahatsoratra.
Safidio izao ny boaty an-tsoratra ny fampiharana tadiavinao ary rehefa miseho maitso ny kisary (+) dia afaho
Izany no fomba tsotra ahafahanao mandika sy mametaka lahatsoratra eo amin'ireo fampiharana samihafa.
Adikao ary apetaho amin'ny Drag & Drop ny sary
Ny iray amin'ireo fahafaha-manao lehibe an'ny rafitra iOS 15 Drag & Drop dia ny an'ny afaka maka sy mitondra ireo sary amin'ireo rindranasa mahaliana antsika amin'ny fomba mora.
Safidio ny sary tianao alaina tahaka. Mba hanaovana izany dia tsindrio mafy / lava eo amin'ilay sary (3D Touch na Haptic Touch).
Amin'izao fotoana izao, raha tianao dia afaka manampy sary maro hafa ianao amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ireo amin'ny tanana hafa.
Ankehitriny ianao dia afaka mivezivezy amin'ny iOS, samy mampiasa ny bara farany ambany ary mankeny amin'ilay fampiharana tadiavinao, nefa tsy mandatsaka ny lahatsoratra.
Safidio izao ny fampiharana izay tianao handikana ny sary na ny setrin'ny sary ary rehefa miseho maitso ny kisary (+) dia afaho.
Sintomy ny sary marobe avy amin'ny Safari
Toa ahy tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo fampiasa lehibe io, ary io no izy afaka misintona sary betsaka araka izay tadiavinao avy amin'ny Safari ianao nefa tsy mila misintona tsirairay azy ireo.
Mandehana any amin'ny Google Images ary tadiavo izay tianao. Mba hanaovana izany dia tsindrio mafy / lava eo amin'ilay sary (3D Touch na Haptic Touch).
Ankehitriny ianao dia afaka mandeha mivantana amin'ny rindranasa iOS Photos, na amin'ny alàlan'ny Multitasking na mivantana avy amin'ny Springboard. Aza adino, tsy mamoaka ireo sary nopihana.
Safidio izao ny fampiharana izay tianao handikana ny sary na ny setrin'ny sary ary rehefa miseho maitso ny kisary (+) dia alatsaho ao amin'ny app Photos izany.
Tsotra be dia be ity fikafika vaovao ity hisintomana sary maro indray mandeha ao amin'ny iOS 15.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Adikao haingana sy tahirizo ny sary sy ny lahatsoratra amin'ny iOS 15 Drag & Drop
Ny olana amin'i Jon Stewart dia ny andian-tantara tsy voatanisa be indrindra amin'ny Apple TV +